XOG:Waan Waantii laga dhex waday Gaas & Camay oo guul daraysatay Iyo Mowqifyo adag oo la kala istaagay – Puntlandtimes
GAROWE(P-TIMES)- Kadib markii uu cirka isku shareeray khilaafkii u dhaxeeyey madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. C/xakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar oo weli kala taagan mowqifyo adag ayaa waxaa isa soo tararayey dadaalada ay wadaan siyaasiyiinta Puntland iyo xubno kala duwan oo xilal ka haya xukuumadda madaxweyne Gaas.
Xildhibaanada Beelaha ku abtirsan goboladda Sool, Sanaag, Hayland iyo Cayn ayaa inta badan u ka dab qaadayey labada dhinac tan iyo habeenkii xalay ahayd, waxaana dadaaladaasi iyo waan waantaasi laga dhex waday labada dhinac ay haatan kusoo dhamaatay mid lagu guul daraystay.
Madaxweyne Gaas ayaa weli taagan in sharci ahaan uu isagu xaq u leeyahay magacaabista gudida xalinta khilaafaadka Puntland isla markaasna uu Camay uga tanaasuli doonin waxyaabaha sharci ahaan uu isagu xaqa u leeyahay.
Eng. C/xakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar ayaa isna ku dhagan mowqif kaas ka duwan oo uu ku burinayo sharciyada gudida xalinta khilaafaadka ee uu magacaabay Gaas, waxaana hada xaalku u muuqdaa mid sii xumaan kara xili walba maadaama labada dhinac uu mid walbaaba kan kale u tanaasuli doonin.
Xildhibaanada iyo xubnaha arintani ku dhex jira ayaa gudoomiye u doortay gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi inta lagu hawlan yahay xalinta khilaafaadka madaxweyne Gaas iyo ku xigeenkiisa.
Siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland ayaa intooda badan garab taagan madaxweyne ku xigeenka Puntland, waxaana xiisadu ay sii cuslaatay kadib markii musharaxiin gaadhaya ilaa 20 musharax ay taageero u muujiyeen gudidii uu magacaabay madaxweyne ku xigeenka Puntland.
Dr. Gaas ayaa haatan wada qorshe uu daaqada kaga saarayo Mr. Camay, waxaana uu xooga saarayaa meel marinta gudidiisa halka is qab qabsiga u dhaxeeya labada masuul uu sababi karo dibu dhac ku yimaada doorashada.